ချို ပေါ့ ကျ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ချို ပေါ့ ကျ (၂)
ချို ပေါ့ ကျ (၂)
Posted by black chaw on Feb 23, 2012 in Creative Writing, Editor's Choice, Myanma News, News, Opinions & Discussion, Photography | 51 comments
မနေ့က တင်တဲ့ chinese or burmese ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်း ဆိုတဲ့ပို့စ်မှာ ကျွန်တော် ရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားစုံတွဲပုံလေးပါလာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရိုက်သူကို အတိအကျ မသိတာ ပို့စ်တင်သူရဲ့ အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ဓါတ်ပုံမှာ အမှတ်အသားမထည့်ထားမိလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာပါ။ ဒါပေမယ့် မှတ်ဥာဏ်ကောင်းလှတဲ့ မိုးစက်က လင့်နဲ့တကွ ဘဘဘလက် ရိုက်တာပါလို့ ပြောနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တူမတော် မိုးစက်ရေ။ ဒီဓါတ်ပုံလေးကို ဧရာဝတီဘလော့ဂ်မှာလည်း ဖေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ ကျေနပ်ရပါတယ်။ တစ်ခုစဉ်းစားမိတာက ကျွန်တော်တို့ တင်တဲ့ ပုံတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ နာမည်လေးတွေ ထိုးထားသင့်ပြီ ဆိုတာလေးပါ။ ကိုပေါက်ရဲ့ အမြင်လေးကိုလည်း သိချင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီတစ်ပတ် လည်း ချိုပေါ့ကျ လဖက်ရည်အရသာလေးရအောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။
လဖက်ရည်ပွဲလေး မစခင် ရွာနဲ့ ခဏတာ ဝေးနေကြတဲ့ ရွာသူားတွေ ကို အလွမ်းစကားလေး တစ်ခွန်းလောက်
ရွာ ကိုလည်း တစ်ချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်
ကဲ ဒီနေ့ထုတ် HOT NEWS ဂျာနယ်ထဲက အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းလေး တစ်ပုဒ်နဲ့ စလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။
ဇေကမ္ဘာ နဲ့ ရွှေနံ့သာ ရွာသားတွေရဲ့ လယ်ယာမြေ ပြသနာလေးပါ။ ဒီနေ့မှ ထွက်တဲ့ သတင်းဂျာနယ်ဆိုတော့ကာ
သူတို့ ဂျာနယ်ကို ငဲ့တဲ့အနေနဲ့ သတင်း အပြည့်အစုံကို မရေးတော့ပါဘူး။
ရွှေနံ့သာ ရွာက လယ်သူမလေး နှင်းနန္ဒာရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုပါ ဖေါ်ပြထားပြီး ဆရာမ မမ နဲ့ အင်တာဗျူးလေး ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အင်တာဗျူးအဆုံးသတ်မေးခွန်းလေးနဲ့ အဖြေလေးကိုတော့ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မမ – ကောင်းပါပြီ။ လယ်သမားမိသားစုတွေ ကျွန်မတို့ ဂျာနယ်တွေကို အားကိုးတဲ့အတွက် ခိုင်လုံတဲ့သက်သေတွေ၊ ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေ ဌာနဆိုင်ရာအကိုးအကားတွေ
ရှာဖွေလေ့လာပြီး သက်ဆိုင်ရာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို စုံစမ်းပြီး ဘယ်သူမှ နစ်နာမှုမရှိရလေအောင် ကြိုးစားပေးပါ့မယ်။ စာမျက်နှာ
ပေါ်ပါဖို့ကတော့ ညီမတို့လယ်သမားမိသားစုတွေ ၀ိုင်းဆုတောင်းကြပေါ့။ စိစစ်ရေးက ခွင့်ပြုရင် သက်သေပြချက်တွေနဲ့တကွ မမတို့ ရေးပေးပါ့မယ်။
နှင်းနန္ဒာ – ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမရယ်။ ကျွန်မတို့ကို ကူညီပါ။ ကျွန်မတို့လဲ ဆုတောင်းပါ့မယ်။
မမ – အခုလို အမဆီကို လာပြီး ဖြေကြားပေးတဲ့ အတွက်လည်း အစ်မက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Hot News ဂျာနယ်နဲ့ မမကို သိက္ခာကျစေချင်တဲ့ အနေအထားတွေကို
ကြားရတဲ့အတွက် မမတောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေ အဝေးကြီးကလာပေးတဲ့ နှင်းနန္ဒာကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီပေါ့။ တရားကို နတ်စောင့်မှာပါ။
ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ ဇေကမ္ဘာ နဲ့ ရွှေနံ့သာ ကြားက ဆရာမ မမရဲ့ ကြိုးစားပေးမှုကို နတ်စောင့်ပါလိမ့်မယ်လို့ အားပေးစကားပြောပါရစေခင်ဗျာ။
ရေးခဲ့ပြီးသလိုပါပဲ။ စောင့်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်လို့ ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်န်ုပ်တို့ ၏ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဆိုလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီပွဲအကြောင်းလေး နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်ပါရစေ။ ဒီတစ်ပတ်ထုတ် နံနက်ခင်း ဂျာနယ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း ရဲ့ အင်တာဗျူးလေးထဲက စကားအချို့ကို ထုတ်နှုတ်ဖေါ်ပြပါရ စေ။
“၂၀၁၀ အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာဆုကို ကျွန်တော်မရရင် အခြားသူလည်း မရသင့်ဘူးလို့ အကျိုးအကြောင်းခိုင်လုံစွာနဲ့ ပြောခဲ့တယ်။ သို့သော် ဆရာခင်မောင်ဦး၊ စိုးသိန်းထွဋ် တို့ရသွားတယ်။ အဲဒီအပေါ် ၀ိုင်း ရဲ့ အမြင်လေး ပြောပေးပါဦး”
“ဦးခင်မောင်ဦး၊ ဦးစိုးသိန်းထွဋ် ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို ဒီလောကထဲ ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတွေပဲလေ။ သူတို့ကို စော်ကားတိုက်ခိုက်လိုခြင်း အလျဉ်းမရှိပါဘူး။ သို့သော်လည်း မှန်မမှန်ဆိုတာ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်က အီမိုးရှင်းတစ်ခုအရ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နေရာတစ်နေရာမှာ ရှုထောင့်တွေက အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ လူတစ်ယောက် စကားပြောတဲ့အခါ မေးခွန်းမေးတဲ့အခါ ဖြေတဲ့အခါ ဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်မှာလဲဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာ ဆိုးနေတာ တစ်ခုက ဘယ်အရာကိုမဆို အီမိုးရှင်းနယ်ဖက်ကပဲ ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အမှားများပါတယ်”
ဒါက ကိုယ်ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အကောင်းဆုံးဆု ရပါလျက် အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု မရခဲ့ရှာတဲ့ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း ရဲ့ အင်တာဗျူးပါ စကားတချို့ပါ။
အဲဒီ ဂျာနယ်ထဲမှာပဲ အောင်နိုင်စန်းရဲ့ ပင်တိုင်ဆောင်းပါး အတွေ့အကြုံပုလဲများကိုလည်း ဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါ ဒီအကယ်ဒမီပွဲနဲ့ ဒီဒါရိုက်တာ ၀ိုင်းအကြောင်းက ပါပြန်ပါတယ်ဗျာ။
ဆရာ အောင်နိုင်စန်း ရဲ့ အကယ်ဒမီ ခန့်မှန်းလေးက ဒီလိုပါတဲ့ဗျာ။
မရမယ့်ဟာကို ရွေးရတာက ပိုသေချာပြီး ပိုလွယ်တယ်ကွ။ အဲဒီထဲမှာမှ ၀ိုင်း ဟာ တစ်ကားမှ ရိုက်မထားသူတွေနဲ့ တန်းတူလို့ ဆိုရလောက်အောင်ကို မရမှာ သေချာပါတယ်
တဲ့ဗျာ။ ဆိုတော့ ဘာလို့များ ၀ိုင်း ဟာ အကယ်ဒမီ မရဖို့ သေချာနေခဲ့တာပါလဲ။
အဲဒီအကြောင်းလေးနည်းနည်း ပွားရရင် အကယ်ဒမီ ဆု ရွေးခြယ်ရေးအဖွဲ့မှာပါတဲ့ အကဲဖြတ်ပညာရှင်တွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့ သြဇာခံ မဖြစ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်သင့်နေပြီ ဆိုတာလေး မီးမောင်းထိုးပြချင်ပါတယ်။ ဒီကောင် ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ကွာ လူရာမသွင်းနဲ့ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ ထပ်မဖြစ်ရအောင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ သဘောကရော ဘယ်လိုများရှိမလဲ သိချင်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် နံနက်ခင်း ဂျာနယ်ထဲမှာပဲ ဒါရိုက်တာ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) နဲ့ အင်တာဗျူးလေး ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။
“နမ်းတဲ့ အခန်း ရိုက်လို့ ရပြီဆိုပေမယ့် သရုပ်ဆောင်တော်တော်များများ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်တွေက လက်မခံကြဘူးနော်”
ဒါရိုက်တာ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး) က ဒီလိုဖြေပါတယ်။
“မြန်မာ့ ဗီဒီယိုဆိုတာ မိသားစုတွေ ကြည့်ကြတာများတယ်။ ဒီတော့ မောင်နဲ့ နှမ၊ သားနဲ့ အမိ ကြည့်လို့သင့်တဲ့ ပုံစံလောက်အထိပဲ ပြသင့်တယ်လေ။ အမေနဲ့သား နမ်းတာကို ပြလို့ အဆင်ပြေပေမယ့် သမီးရီးစားပုံစံကျတော့ နည်းနည်း အရေးကြီးလာပါပြီ။ ဇာတ်ဝင်ခန်းအရ နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်လို့ အမြတ်တနိုးနဲ့ လက်ကလေးပါးကလေးကို ယုယုယယနဲ့ နမ်းတာမျိုးက ကြည့်ရတာလည်း အဆင်ပြေပေမယ့် ချိန်းတွေ့တိုင်း နမ်းတာမျိုးတော့ ပြလို့မရဘူးလေ။ အဲလိုမျိုးလည်း မပြသင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပါးကို နမ်းဖို့ဆိုတာ သူတို့တကယ်ချစ်သူကိုသာ ခွင့်ပြုတဲ့ နေရာပါ။ ဒါကို ဇာတ်ဝင်ခန်းအရသာ ခွင့်ပြုလိုက်ရပေမယ့် တကယ်တော့ သူတို့လည်း ဘယ်ခွင့်ပြုချင်ပါ့မလဲ။ အဲဒီအတွက် ရိုက်ခွင့် ရပြီ ဆိုတိုင်း မရိုက်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်”
တဲ့။ အင်း ခင်ဗျားတို့ ဒါရိုက်တာတွေ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ညွှန်ကြားကြပါမှာ တော်ရာကျမယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ မင်းသမီးတွေ ရိုက်ရဲပါ့မလား ဆိုတဲ့ အပိုင်းကတော့
အင်း….(သက်ပြင်းရှည်ကြီးချသံ)လျှောက်တတ်တော့ပါဘူးဗျာ။ မြန်မာမင်းသမီးတွေ ဒီလောက်သတ္တိနည်းလိမ့်မယ်လို့ မထင်ရက်ပါဘူးခင်ဗျာ။
သီးလေးသီးအဖွဲ့ သံလျင်ပွဲမှာ တစ်ည အပိတ်ခံရတယ် ဆိုတာလေးလည်း နံနက်ခင်းဂျာနယ်ထဲက သတင်းအစအနလေး ရခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အပိတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ ဘာတွေများ သွားပျက်ကြသလဲ သိပါဘူးဗျာ။
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် Street View ဂျာနယ်ထဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ဒေါက်တာစိုးမင်းနဲ့ အင်တာဗျူးလေးထဲက အမေးအဖြေလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
မေး။ ဒေါက်တာ့အနေနဲ့ ကော့မှူးမြို့နယ်ကနေတစ်ဆင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ဖို့ ၀င်ရောက်ရွေးချယ်ခံမယ်ပေါ့။ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားခဲ့ရင် ကော့မှူးဒေသတစ်ခုတည်းအတွက်တင်မဟုတ်ပဲ တစ်တိုင်းပြည်လုံးအတွက် ဆောင်ရွက်ရတာ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအတွက် ဒေါက်တာဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ဘယ်လို ကွာခြားနိုင်မယ်လို့ မြင်မိလဲ။ ဘယ်သူက ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်လို့ရော ထင်မိလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ကျွန်တော်ဟာ သာမန် ဆရာဝန်လေး တစ်ယောက်ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံခြားပညာသင်ပြီးတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမီးလေ။ မွေးဖွားလာတဲ့ Position ခြင်း မတူဘူး။ သာမန်လယ်သမားကြီးတစ်ယောက်ကမွေးပြီး ကျွန်တော်က ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတာ။ မွေးဖွားရာ Position ပေါ် မူတည်ပြီး လူ့ဘ၀က ပြောင်လဲသွားနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်မာန်တက်တဲ့ စကားကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီစကားကလည်း လွန်ခြင်း၊ မလွန်ခြင်း၊ ကျွန်တော်မပြောလိုဘူး။ တကယ်လို့များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ကျွန်တော့်နေရာမှာမွေးပြီးတော့ ကျွန်တော်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သားအဖြစ် သွားမွေးရင်ရော ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။ အဲဒီအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ နိုင်ငံချစ်တာခြင်း အတူတူပဲ။ သဘောတစ်ခုက မိသားစုတစ်စုမှာ အစ်မက နိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်တယ်။ ပြန်လာမယ်။ ကျွန်တော်က ဒီမိသားစုမှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြီးလာတာ။ ကျွန်တော့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ အလွှာအသီးသီးက ဝေဒနာတွေကို ကျွန်တော်က သိတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုရဲ့ အူမချေးခါး အကြောင်းအရာတွေ၊ ဘယ်သူကတော့ ကောင်းတယ်။ ဘယ်သူကတော့ ဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတဲ့ အစ်မက သိနိုင်မလား။ စေ့စေ့ငင သိနိုင်မလား။ ဒီသဘောတရားအတိုင်း ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေ အနေနဲ့ ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဒီလိုအင်တာဗျူးတွေကနေ သင်ယူစရာတွေ အများကြီး ရှိနေတဲ့အကြောင်းလေး လက်တို့ ချင်ပါတယ်ဗျာ။
ပြောသမျှစကားတိုင်းမှာ မားကက်တင်း မာယာတွေကို လေ့လာနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပါ။ လက်လွှတ်မခံကြပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
Street View ဂျာနယ်မှာပဲ ဦးခင်ညွန့် ဟာ ကျောက်တန်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ်သိန်းတစ်ရာ မတည်ပြီး ရွှေမှော်ဝန်း လူမှုရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ သတင်းလေးပါပါတယ်ခင်ဗျာ။
မနေ့က ထွက်တဲ့ ဆဲဗင်းဒေး ထဲက မှတ်သားစရာ၊ သင်ယူစရာလေးတွေလည်း ပြောပါရစေခင်ဗျာ။
အရင်ဆုံး ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ပြည်သူလူထုကို အစားအသောက်ပျက်စေခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းအုပ်စိုး ကို ပြစ်မှုသုံးခု ဖြင့် တာမွေမြို့နယ် ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းလေးကို ဖတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်က ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအား အနိမ့်ဆုံးပျှမ်းမျှ တစ်လ ကျပ်တစ်သိန်းနှုန်း ၀န်းကျင်ဖြင့် လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်ပေးသင့်သည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကထံသို့ ပေးပို့သည့် သ၀ဏ်လွှာတွင် ထည့်သွင်းထားပါတယ်တဲ့ဗျာ။
အင်း အဲဒါကတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ ကျေနပ်ကြမယ့်သတင်းပေမယ့် အပြင်က လက်လုပ်လက်စားတွေ ကရောတဲ့၊ အင်း သူတို့လည်း ကျေနပ်ကြမှာပါဗျာ။ ကုန်ဈေးနှုန်း ကြီးက ဒီအတိုင်းနေမှာတဲ့လား။ လူပြိန်းတွေးတွေးကြည့်တာပါဗျာ။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာရမှာပေါ့နော။
နောက်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက စက်မှုဇုန်ဖေါ်ထုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မီဒီယာသို့ ရှင်းလင်းဆိုတဲ့ သတင်းလေးပါ။ ကျွန်တော်က ဥာဏ်ရည်နိမ့်လို့ နားမလည်တာလေး တစ်ခုလောက် ရွာသူားတွေကို မေးချင်တာပါ။ အဲဒီ စက်မှုဇုန် (၄) ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်မည့် ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စုရှိ လယ်သမားများအတွက် လယ်တစ်ဧကလျှင် ကျပ်သုံးသိန်း နှုန်းဖြင့် ကရုဏာကြေး (လျော်ကြေး) ပေးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီကလည်း တစ်ဧကလျှင် ကျပ် ၄၄ သိန်းနှုန်းဖြင့် အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန ထံမှ ၀ယ်ယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လယ်ပိုင်ရှင် က သူလုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ လယ်မြေတွေကို တစ်ဧက သုံးသိန်းပဲ ရပြီး အိုးအိမ်က ၄၄ သိန်း ရတယ် ဆိုတာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပဲလား။ တရားနည်းလမ်းကျတယ်တဲ့လား။ ကျွန်တော် တကယ်မတွေးတတ်တော့တာပါ။ ဟော ဇေကမ္ဘာကလည်း တစ်ဧကကို ကျပ် သိန်းလေးရာ နဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချပါတယ်ဆိုတော့ ပိုပြီး ဝေးပြီပေါ့ဗျာ။ လယ်ပိုင်ရှင်နေရာက ၀င်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်ပိုင်တဲ့မြေကြီးကို တစ်ဧက သုံးသိန်းလောက်နဲ့ လက်လွှတ်လိုက်ရပြီး သိန်းလေးရာလောက်နဲ့ ပြန်ရောင်းနေတာသိရတော့ … အင်းလေ မြန်မာလူမျိုးတွေက အလှူဒါန သိတ်ထက်သန်ကြတဲ့ လူမျိုးတွေဆိုတော့… မုဒိတာလည်းအလွန်ပွားတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေ ဆိုတော့…။ ….ဆိုတော့။
နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ လှချင်သူတွေ သတိထားရမယ့် သတင်းလေးခင်ဗျ။ အလှပြင်ရာမှ အပူလောင်ပြီး ဆံပင်တွေကျွတ်ကုန်လို့ အလှဖန်တီးရှင်သုံးဦးကို ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တယ်တဲ့ ခင်ဗျာ။ သတိလေးနဲ့ အလှပြင်ကြပါ မယ်မင်းကြီးမတို့ရေလို့ သတိပေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။
နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်က ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးကို NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ။ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရသေးခင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ရရှိသွားပါပြီတဲ့ ခင်ဗျာ။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြောရဲဆိုရဲတဲ့ ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးကို ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေ သိကြမှာပါနော့။
အိပ်ချင်ပြေ ဟာသလေးတစ်ချို့ စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာထက်ငြိမ်းဝေ ရဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ် ဇီဝက မဂ္ဂဇင်းပါ ဆေးလောက ဟာသတွေထဲက ဟာသတိုလေး တချို့ပါ။
လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ ရောဂါကို ဖေါ်ထုတ်ရာမှာ အရေးအပါဆုံးအချက်က History Taking ဟစ်စထရီ တိတ်ကင်းပါတဲ့ ခင်ဗျာ။ ရောဂါရာဇ၀င် စစ်မေးခြင်းသည်သာ ရောဂါရှာဖွေရေးဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက ဇာတ်လိုက်ကြီးပါတဲ့။ အဲဒီ ဟစ်စထရီ တိတ်ကင်း လုပ်ရင်း အိုးနင်းခွက်နင်း ဖြစ်ရတာလေးတွေပါ။
အပျိုကြီး မမတစ်ယောက်နဲ့ မလည်မ၀ယ် ဆေးကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ရဲ့ History Taking ကတော့ အောက်ပါ အတိုင်းပါတဲ့။
“အစ်မကြီး နာမည်လေး ပြောပါဦး”
“အော် မမ နာမည်လေးက ခင်နှင်းဝေတဲ့ ကွဲ့”
“ဟို အတိအကျလေး ပြောပါခင်ဗျာ”
“အိမ်ထောင် ရှိ၊ မရှိ”
“မမက အိမ်ထောင်ရေး စိတ်မ၀င်စားသေးပါဘူးကွယ်။ စိတ်က လုပ်ငန်းထဲပဲ အချိန်ပြည့်ရောက်နေတာ။ ဟင်း…ဟင်း..”
“ဟို…အစ်မကြီး ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ ပြောပါဦး”
“အိုကွယ်။ မမ ရောဂါက မိန်းကလေး ရောဂါကွယ့်။ မောင်လေးကို ပြောပြရမှာ ရှက်စရာ။ ဟို…မောင်လေးအစား ဆရာဝန်မလေး တစ်ယောက်လွှတ်လိုက်ပါလား”
“ဟာ… မဖြစ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ဆေးလောကမှာ ကျား၊ မ ခွဲနေလို့ ရှက်နေလို့ မရဘူးဗျ။ ဘာမဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမှ မရှက်မကြောက် အစမ်းသပ်ခံမှ ရောဂါမှန်သိမှာ။ ကဲ…ပြောပါဦး။ အစ်မကြီးရဲ့ ရောဂါ”
“အင်း…ပြောရရင်တော့ကွယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကတည်းက မမ လုံချည် ပျောက်သွားတာ..”
“ဟာ…ခင်ဗျားလုံချည်ပျောက်သွားတာနဲ့ ဆေးရုံနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာ။ ဆေးရုံက လူတွေကို လုံချည်သူခိုးများ မှတ်နေလား”
ဒီလိုနဲ့ ဆေးကျောင်းသားရဲ့ ဟစ်စထရီတိတ်ကင်း ဟာ ကိုးရိုးကားရားနဲ့ အပြီးမသတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဗျာ။
မြန်မာရည်မ၀တဲ့ မြန်မာလူငယ်လေး တော်တော် များများကို တွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ လူကြီးသူမတွေ နဲ့ မပြောတတ် မဆိုတတ် ရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ မပြောတတ် မဆိုတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေလေ။ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေထဲက စံပြလို့ ခေါ်ရမယ့် ဆေးကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ဟစ်စထရီ တိတ်ကင်းကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်…
“ဟိုလေ… ဘုန်းကြီးရဲ့ နာမည်လေး ပြောပါဦး ဘုရား”
“ဦး သောဘိတပါ ဒကာ”
“ယောက်ျားလား မိန်းမလား ဘုရား”
“မြန်မာလူမျိုးပေါ့ကွ၊ မြန်မာ၊ မြန်မာ”
“ဟ..ဘုန်းကြီးပါဆိုမှ ဆွမ်းခံတယ်ကွာ။ တရားစာဖတ်တယ်ကွာ။ တရားဟောတယ်ကွာ..”
ဆရာတော်ဟာ ဆေးကျောင်းသားလေးကို ဒါလောက်လေးမှ မသိရကောင်းလားဆိုပြီး အတော်လေး စိတ်တိုပြီး ထရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တရားသမားဆိုတော့ သည်းခံစိတ်လေးမွေးပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ထိန်းနေပါတယ်။ ဒါကို သတိမထားမိတဲ့ ဆေးကျောင်းသားလေးက အူတီးအူကြောင်နဲ့ ထပ်မေးလိုက်တာက…
ကဲ… အဲဒီဘုန်းကြီးဟာ အဲဒီကျောင်းသားကို ထရိုက်မရိုက်ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်တွေးကြည့်ကြပါတော့ဗျာ။
ဒီတစ်ပတ် ချိုပေါ့ကျ ထဲမှာ ဗဟုသုတလေး တစ်ခုလောက်တော့ ထည့်ရေးလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။
မြန်မာတွေမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်အချိန်တိုင်းတာမှု အခေါ်အဝေါ်လေးတွေ ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ဖတ်မိလိုက်လို့ ဝေမျှပေးပါရစေ။
မျက်စိ ၁၀ မှိတ် – တစ်ခဏ
၁၀ ခဏ – ၁လယ်
၁၀ လယ် – ၁ ခရာ
၁၀ ခရာ – ၁ ပြန်
၆ ပြန် – ၁ ဗီဇနာ
၁၀ ဗီဇနာ – ၁ ပါတ်
၄ ပါတ် – ၁ နာရီ
၆၀ နာရီ – ၁ ရက်
၃၀ ရက် – ၁ လ
၁၂ လ – ၁ နှစ်
ဒီတစ်ပတ်ထဲ သွားရင်းလာရင်း လက်ဆော့ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မြို့ပြ ရေမြောင်းထဲက မြွေတစ်ကောင်။
အခုတလော ကျွန်တော် အာရုံကျနေတဲ့ သစ်ရွက်ဝါလေးတွေရဲ့ အလှ။
ကိုးမိုင် အောင်မြေဘုံသာ ကျောင်းဝန်းထဲက ရှမ်းတို့ရဲ့ နှီးဘုရားကြီး။
မဟာကျိန်သစ္စာရှင် ဘုရားကြီး ရဲ့ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ပုံတော်။
ပန်းတွေကြားမှာ မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့ ရှက်ပြုံး။
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ထူးဆန်းသော ရုပ်ပွားတော်။
၀ိုင်းက အဲဒီ အခန်းကို ဖြတ်ခိုင်းလို့အကယ်ဒမီ မရတာ
ပါးနမ်းတဲ့ အခန်းကတော့ ဒါရိုက်တာက မရိုက်ချင်ရင်တောင် မင်းသမီးက ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်
ချင်နေတာတွေ ရှိမှာ ဗျ ( သူလက်ခံလို့ ရတဲ့ လူဆို နမ်းပါပေါ့ဂျာ)
ဥပမာ- အနမ်းခန်း ပါရင် ကိုကိုချောကလွဲ၍ မည်သူမှ မနမ်းရပေါ့
အစက အမှု ၁၁ မှု ကြားတာ ခု ၃ မှုဆိုတော့ တော်သေးတာပေါ့ကွယ်..
များတို့ ဖြင့် ရင်တွေခုန်လိုက်ရတာ ပြောမနေပါနဲ့ တော့
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း မျက်လု့းညောင်းလာပြီ ကိုချောရေ
ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်တွေ ဂွတ်တယ်ဗျို့ 
နှီးဘုရားကြီးကို နီးနီးနားနားနဲ့တစ်ခါမှ သွာမဖူးရသေးဘူး တိုင်းကျူး
ဗျစ်..ဗျစ်..ဘစ်..ဗစ်.. (ထွက်ကျရင် အခြောက်မ တစ်အုပ် လုမစားရ )
နောက်တစ်ခုက တော့ ခင်ဗျားစေတနာကို လေးစားပါတယ်
ဟာသတွေလည်းပါ နိုင်ငံရေးလည်းပါ ရသလည်းပါ ကိုဘလက်ရေ
ဝေဖန်ချက်တွေကတော့ ကျွန်တော်ထက် အမြင်ကောင်းတဲ့ လူတွေပေးလိမ့်မယ်
အောက်ဆုံးက အချိန်ဗဟုသုတ အတွက် ကျေးကျေးဗျ…
ပြီးတော့ ဇေကမ္ဘာပြဇာတ် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ သိချင်သား..
ဒါနဲ့ ဒေါက်တာ စိုးမင်းအင်တာဗျူး မှာ.
သူပြောထားသလို ဆို သူကအလွှာအသီးသီးက ဝေဒနာတွေ.အူမချေးခါးတွေကိုသိကောင်းသိမှာပေါ့.
သို့သော်ပျောက်အောင်ကုနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေကို ဖြစ်စေ ရစေမှာကသူမဟုတ်ဘူးလေ..နော့
ရောဂါကသိတဲ့လူနဲ့ မရဘဲ ကုနိုင်တဲ့လူကပိုအရေးကြီးနေတာကိုး..
လက်ဘက်ရည်အတွက် လက်တချောင်းဗျ နော်..
(ကိုသစ် စကား ခန ချေး၍..)
မိုးစက် နဲ့ စတယ် ..
(ဆြာမ) မမ အကြောင်းပြောတယ်.. ပီး …
မြန်မာ့မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ကို မီးမောင်း ထိုးတာ လုပ်လိုက်သေးရဲ့….
မားကတ္တိန်း တွေ မာယာ တွေ ကြားထဲ ရောလွှတ်လိုက်သေးရဲ့ ….
မင်းသမီး ကို မွမွ လုပ်တဲ့ကိစ္စ အပီးမှာ
မင်းအုပ်စိုး မူး လို့ဖြစ်တဲ့ အမှု ကိစ္စ ရယ် …
မြေကိစ္စ ဟို မေဘေးဒွေ ကိစ္စရယ်…
မဲ ကိစ္စ နဲ့ အမတ် <လောင်း မြတ်ဉာဏစိုး ရယ်
မက်ဒီကယ်လ် နောက်ခံ ဟာသ ဖြစ်ရပ်လေးရယ်…
မြောင်း ထဲက မြွေ ကိုပါ ရိုက်ပြသွားပါလားဟရို့ …။
ဘယ့်နှယ့် ကိုယ့်ဆြာ ..
သည်တပါတ် မ ဓါတ်ကျနေတယ်ထင်ပါ့ …
ကိုဘလက်ချောရဲ့ ချိုပေါ့ကျလေးအားရပါးရ သောက်သွားပါတယ်။
(၁)“မြန်မာ့ ဗီဒီယိုဆိုတာ မိသားစုတွေ ကြည့်ကြတာများတယ်။ ဒီတော့ မောင်နဲ့ နှမ၊ သားနဲ့ အမိ
ကြည့်လို့သင့်တဲ့ ပုံစံလောက်အထိပဲ ပြသင့်တယ်လေ။ အမေနဲ့သား နမ်းတာကို ပြလို့ အဆင်ပြေ
ပေမယ့် သမီးရီးစားပုံစံကျတော့ နည်းနည်း အရေးကြီးလာပါပြီ။ ဇာတ်ဝင်ခန်းအရ နှစ်နှစ်ကာကာ
ချစ်လို့ အမြတ်တနိုးနဲ့ လက်ကလေးပါးကလေးကို ယုယုယယနဲ့ နမ်းတာမျိုးက ကြည့်ရတာလည်း
အဆင်ပြေပေမယ့် ချိန်းတွေ့တိုင်း နမ်းတာမျိုးတော့ ပြလို့မရဘူးလေ။ အဲလိုမျိုးလည်း မပြသင့်ဘူး
လို့ မြင်ပါတယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပါးကို နမ်းဖို့ဆိုတာ သူတို့တကယ်ချစ်သူကိုသာ ခွင့်ပြုတဲ့
နေရာပါ။ ဒါကို ဇာတ်ဝင်ခန်းအရသာ ခွင့်ပြုလိုက်ရပေမယ့် တကယ်တော့ သူတို့လည်း ဘယ်ခွင့်ပြု
ချင်ပါ့မလဲ။ အဲဒီအတွက် ရိုက်ခွင့် ရပြီ ဆိုတိုင်း မရိုက်သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်”
(၂)“ဟာ… မဖြစ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့ ဆေးလောကမှာ ကျား၊ မ ခွဲနေလို့ ရှက်နေလို့ မရဘူးဗျ။
ဘာမဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောမှ မရှက်မကြောက် အစမ်းသပ်ခံမှ ရောဂါမှန်သိမှာ။ ကဲ…ပြောပါဦး။
အစ်မကြီးရဲ့ ရောဂါ”“အင်း…ပြောရရင်တော့ကွယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကတည်းက မမ လုံချည်
ပျောက်သွားတာ..”“ဟာ…ခင်ဗျားလုံချည်ပျောက်သွားတာနဲ့ ဆေးရုံနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာ။ ဆေးရုံက
လူတွေကို လုံချည်သူခိုးများ မှတ်နေလား”ဒီလိုနဲ့ ဆေးကျောင်းသားရဲ့ ဟစ်စထရီတိတ်ကင်း ဟာ
ဒီဟာသ လေးနှစ်ခုကတင် ပျော်စေသလို၊ထောက်ပြဝေဖန်ပေးခဲ့သလိုပါဘဲဗျာ။လေးစားအားကျလျှက်
ကြက်ဖွတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာစိုးမင်းဆိုတဲ့လူက ပြောလည်းပြောချင်၊ ပြောလည်းမပြောရဲ…နင်တော့ခက်ပြီ..။ လူတောထဲတိုးမရ၊ လူဆိုးကြတော့လည်း မလုပ်ရဲ…။ မမိုက်ချင်စမ်းပါနဲ့ကွာ…။ နင်လုပ်တာနဲ့ ဆရာဝန်တွေ အချောင်နာမည်ပျက်ကုန်မယ်…။
မရဲ တရဲလေး တောင်းဆိုကြည့်ချင်ပါတယ်
ဒီ ချိုပေါ့ကျလေးတွေကိုတော့ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ လောက်မက တိုင်အောင် ဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်
ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ရေးချင် ရေးမယ် မရေးချင် မရေးဘူး ဆိုပေမဲ့ မဒမ်ချော ကို ချစ်သလို ချိုပေါ့ကျ လေးတွေကို ချစ်နိုင်ပါစေ……
ကိုနှိုဇိုမိနဲ့ အတူ ထပ်တူ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ
အန်တီချောကိုချစ်သလို ချိုပေါ့ကျကိုလဲ ချစ်နိုင်ပါစေလို့ 
မြွေတွေ့ တော့ ဖမ်းခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူးရယ် ။
မြွေမြင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ ကျုပ်တို့ ဗမာအရဆိုရင် လာဘ်ရှိတာပေါ့ဗျာ ။ ရှေးလူတွေ ပြောသလိုပါ ။
အခုခေတ်မှာတော့ သူ့ ဘာသာသူသွားနေတဲ့မြွေ ကို မြင်တာနဲ့ ၊ ဘာကိတ်စ လာဘ်ရှိရမှာလဲ လို့ ပြောကြမှာပါဘဲ ။
ဦးဘလက်ရေ… အဲမူပိုင်ကိစ္စတွေက အင်တာနက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အတော်ကို ဂယက်ရိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေအပြင် ဆောင်းပါးတွေ၊ စာမူ၊ ကဗျာတွေ စတဲ့အားလုံးပေါ့လေ တစ်ခါတလေ ကိုယ်ရေးထားတာ ကိုယ့်ဆီဖော်ဝေါ့မေးနဲ့ပြန်ရောက်လာတော့ သူများနာမည်နဲ့ဖြစ်နေတာတွေအဆုံးပေါ့လေ။ အဲဒီကိစ္စကို အိုင်တီလောကမှာလည်း ခုနည်းပညာ ဥပဒေဆိုပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းသဘောမျိုးနဲ့ စုစည်းပြီး လွှတ်တော်ကိုကော ဒါတွေ တင်ပြဖို့ လိုလာပြီလို့လည်း တွေးမိကြပါတယ်။ နောင်ကို မူပိုင်ခွင့်အတွက် အဆင်ပြေလာမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။ နည်းပညာ ဥပဒေထုတ်ပြန်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲလိုသာ ဥပဒေရှိလာခဲ့ရင် အလွန် ၀မ်းသာစရာ ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့ အမှတ်အသားပြုထားမှသာ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ခံစားရတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်က ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မှမဟုတ်တာဆိုတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလေပေါ့။
တကယ့်ကို ချိုပေါ့ကျပါ။ ဒါနဲ့ ရွှေတိဂုံပေါ်မှာ ဒီလိုရုပ်ပွားတော်ရှိမှန်း သတိမထားမိဘူး။ ထူးတော့ ထူးဆန်းသလိုပဲ။
ပုံတွေရဲ့အောက်..ညာဖက်ထောင့်မှာ.. http://www.myanmargazette.net ကို Watermark စလုပ်ကြည့်နေပါတယ်..။
အနှောက်အယှက်မဖြစ်ရအောင်အရွယ်ကိုသေးထားပေမဲ့.. ပုံခိုးခံရရင်..ဘယ်ကလည်း သိမလားပဲရယ်..။
ကျုပ်တို့မှာ.. ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်မဖတ်ရတော့.. တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့…။
. ရန်ကုန်မှာတုံးက.. လဖက်ရည်သောက်ရင်.. ပေါ့ကျသောက်တယ်…။
ဒါက ဒီလိုရှိတယ်ဗျာ ….
ရေစာ ကိစ္စပြောပါတယ် ….
သဂျီးနည်းက ထိရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးခည…
အဲ့လောက်ပိစိလေး ဆိုတော့ …ခိုးကူးချင်သူက နည်းနည်းလောက် ခရော့ပင် ချလိုက်တာနဲ့
ပုံအရသာမပျက်ဘဲ …ကူးလို့ ရသွားဘီ ….
အဲ့ …ကြီးပြန်ရင်လည်း ပြသနာ တခုက
ကြီးလွန်းရင် ပုံ အရသာ ပျက်တယ် …. ရိုက်တဲ့လူ စိတ်ထိခယက်လိမ့်မယ်…
အီလဲဗင်းတောင် ရေစာကြီးလွန်းလို့ ၀ိုင်းသမ ခံထိဖူးသေးတယ်…
ခုမှ အတော်လောက်ဖြစ်သွားတာ …..
နောက်ဆုံးအချက်က ရွာသူားတွေ သူများဆိုက်တွေဘာတွေက နေကူးလာတဲ့ပုံ ……
ရေစာ ပါပြီးသားကြီး …ဒါမှမဟုတ်ရေစာမပါသော်လည်း သူသာလျင်မူပိုင်ဖြစ်ကြောင်း
ပြနိုင်တဲ့ပုံမျိုးကို သဂျီးရေစာ အော်တို ကပ်မိရင် ….ရွာသားအမှု သဂျီးပတ်လိမ့်မယ်နော…
သည်တော့ ဒါ့ပုံးဆြာတွေကို အကျိုးမျှော် နှိုးဆော်လိုတာက ကိုယ့်ပုံကိုယ်နှမြောရင် စိတ်ထိခယက်တတ်ရင်
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စီးပွားတိုး လုပ်ကြပါ ဆြာတို့ ….
ကျုပ်ကတော့ ရှင်းတယ်..ပျင်းတာလဲပါတယ်. . ရောင်းတမ်းလည်း မရိုက်နိုင်သေးတာလည်းပါတယ်..
အားရင် ကပ်တယ် မအားရင် မကပ်ဘူး … ကူးချင်သပါ့ဆိုလည်း ပျော်ပျော်ဂျီးကူး…
တလောလေး က အဂ္ဂမဟာ ဖေ့စဘုတ်တော်ကြီးမယ် ရွှေတိဂုံဘုရား ဖန်ပေ့ခ်ျ …တင်ထားကြတာတွေ့တယ်..
၀င်ကြည့်တော့ လားလား …သည်ရွာထဲမှာရော ကျနော့် ဖေ့စဘုတ်မှာပါ …တင်ထားတဲ့
ရွှေတိဂုံဘုရား အံ့ဖွယ်(၉)ပါးတွေဘာတွေ ကူးတင်ထားလေရဲ့ …..
Inz@ghi ရေစာဂျီး ကို ပြူးလို့ ….ခရက်ဒစ် မရပေါင်ဗျာ ….
ကူးတင်တဲ့လူကိုတောင် ၀ိုင်းကျေးကျေးကြပြီး ထပ်ဆင့် ထပ်ဆင့်ရှဲကြသေးတယ်….
အံ့ဖွယ်(၉)ဆူသမိုင်း ရှာဖတ်ပြီး တင်ပေးပါ့မယ်ဘာမယ်တွေတောင် အလွမ်းသယ်သေး…
အစကတော့ နည်းနည်း ကျွဲမီးတိုတာပေါ့ …အဲ့ …ဘုရားနဲ့ ပါတ်သတ်တော့လည်း ပြောရခက်သားလား..
စိတ်ထိခယက်နေလို့ အပိုပဲလေ …ဆိုပီး သူရို့ မတင်ရသေးတဲ့ ကျန်ပုံတွေ လက်ရှိနာမည်
ဖားသက်ပြင်း နဲ့ တင်ပီးပူဇော်လိုက်တယ်ဗျာ …. ဘုရားfan ၁သောင်းကျော် မျက်နှာကြောင့်ပါ…
(အော်.. ..ရယ်. …. facebook ဆိုတော့လည်း facebook အသုံးအနှုံး သုံးရတာပေါ့….)
နေ့တိုင်း ဘယ်သူကတော့ ကြိုက်တယ် ဘယ်သူကတော့ ဘာရေးသွားတယ် ..
ဘယ်နှယောက်ရှိပီ အစရှိသဖြင့် ထိုင်ပြီး စိတ်ကြည်နူးရပါကြောင်း ……
အခိုးခံရတာ တခါတခါလည်း ခက်ကောင်းကောင်း ရှိသေးသကိုးဗျိုး ……။
မပြောမရှိနဲ့။ ကြုံတုန်း အရီးကိုလဲ ကြွားခွင့်ပေး။
ဒီဟာ အရီး ၂၀၀၉ ကွန်ပျူတာ Website တစ်ခုမှာ အဖွဲ့ဝင်တုန်း ဘီလ် နဲ့ စတိဗ် ရဲ့ မိန့်ခွန်း နှစ်၂ခု တင်ထားတာ။ နောက် သင်တန်း တစ်ခု တက်တော့ ၁နှစ်ကျော်နီးပါး အဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီး နောက်တော့ အဲဒီကို ပြန်မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး။
အဲဒါကို ဂေဇက်မှာ တွေ့လိုက်ပြီးကထဲက ကြောင်ကြီး ဆိုတာကို ကျေးဇူး တင်နေတာ။
ဒါကြောင့် အခု သူ့ ကို ကျောပွတ်ပွတ် ပေးနေရတာ။
အခုကတော့..ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်.. မိထားသမို့.. ပိုတောင်ရယ်ချင်သွားတယ်..။
ကိုချောရေးထားတဲ့ “တစ်ခုစဉ်းစားမိတာက ကျွန်တော်တို့ တင်တဲ့ ပုံတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ နာမည်လေးတွေ ထိုးထားသင့်ပြီ ဆိုတာလေးပါ” ဆိုတာလေး ပြောချင်ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ ပုံလေးတွေ ယူသုံးကြတယ်ဆိုတာမှာ တစ်ချို့က ပုံကို တစ်နေရာက ရလို့ သုံးချင်တယ်။ မူရင်းပိုင်ရှင် မသိလို့ Credit မပေးနိုင်တာနဲ့ သိရဲ့နဲ့ အတမင်ကို မူရင်းပိုင်ရှင်ကို မဖေါ်ပဲ ကိုယ့်ပုံလို ခတ်တီတီ သုံးတာ။ နောက်ပြောရင် မသိလို့ပါ ပြောမယ်ပေါ့။ ဒါမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် ပိုင်ရှင် အမည်ပါတော့ အတမင် မဖေါ်ပြရင်တော့ မရိုးသားတာ ပေါ်လွင်တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ နာမည်လေးတွေ ထိုးထားတယ်ဗျို့။
အင်း…..သတင်းတွေများလွန်းတော့ တိတ်တိတ်လေးပဲ ဖတ်သွားတယ်…
ကျွန်တော့် လက်ဘက်ရည်ချိန်က ညနေစောင်းမှာမို့ပါ
၀ိုင်း ကိစ္စက ကျွန်တော် လည်း သဘောပေါက်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီ ဆု ရွေးခြယ်ရေးအဖွဲ့မှာပါတဲ့ အကဲဖြတ်ပညာရှင်တွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့ သြဇာခံ မဖြစ်သော လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်သင့်နေပြီ
အရည်အချင်းရှိတာမှန်ရင် ချီးမြှင့်ရမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီအတွက် ရွေးခြယ်တဲ့လူတွေ အရေးကြီးပါတယ်
htet way –
ကိုထက်ဝေးရေ။ ၀င်ဖတ်ပြီး ကွန်းမန့်လေးပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ညီလေးရေ။ အဲဒီ မြန်မာအချိန် အတိုင်းအတာတွေကို လူတော်တော်များများ
မသိကြပါဘူး။ မသိကြသေးသူတွေအတွက် ဗဟုသုတရတယ်ဆိုရင် ၀မ်းသာပါတယ်။
ကွန်းမန့်လေးအတွက်ရော လက်တစ်ချောင်း(လက်မလို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါတယ်နော)
စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ပြီး ပေးခဲ့တဲ့
မ တွေ လွှမ်းမိုးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
နောက်တစ်ခါ ကျားတွေ ဘက် လှည့်ပြီး ဓါတ်ကျဦးမယ်ဗျာ။
ညီလေးရေ။ အစ်ကို့ပို့စ်လေးတွေဆို အမြဲအားပေးတတ်တဲ့
အသာလုပ်ပါ။ အခုတလော တော်တော် ကြပ်နေတယ်နော်။
ခြေမမကောင်းခြေမ၊ လက်မမကောင်းလက်မ ပေါ့ဗျာ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့်ပုံလေး သုံးထားတာ တွေ့ရင်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ တောင် ဖီလင်ဖြစ်ရင်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်က ဂီတသမားတွေ ဖီလင်ဖြစ်ကြတာ
အဲဒါကြောင့် ကိုသော့ဆီက သင်ယူနေတာပေါ့ဗျာ။
ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်တိုင်း တစ်ပုံဆီ ကြည့်ပြီး
Fatty Cat –
ညီလေးပေးသွားတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
အဲဒီလို watermark ထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့လည်း ကျေးဇူးပါဗျာ။
ကျွန်တော်တောင် မသိပါဘူးဗျာ။ အခုမှ ဓါတ်ပုံလျှောက်ရိုက်ရင်း
တွေ့လို့ လက်ဆော့လာတာပါ။ အသက်ရှိနေသလိုပဲဗျ။
ချိုပေါ့ကျ လေး ဖတ်ရတာ အကြောင်းအရာ အမျိုးစုံပါပဲ။
မြွေကလေးက လူကြောက်လို့ တိတ်တိတ်လေး ပုန်းပြီး သွားနေတာ အင်တာနက်ပေါ် အတင်ခံရလို့ တော်တော် ရှက်နေမလားတောင် မသိဘူး။
ရုပ်ရှင်လောကကတော့ ကိုယ်နဲ့ အလှမ်းဝေးလွန်းလို့ သိပ်မပြောလိုတော့ပါဘူး။
စကားစပ် ရွှေတိဂုံ ပွဲတော်ရက် စနေပြီနော်။
ကိုဘလက်ရဲ့ ချိုပေါ့ကျလေး အချိန်ကိုက်သောက်လိုက်ရပါတယ် ကိုဘလက်ရေ-
အခုကွန်မင့်လဲ အရင်ချိုပေါ့ကျ၁ကကွန်မင့်လို submit လုပ်လို့မတက်မှာတော့ တွေးပူသား…။
သူတို့တွေ လုပ်နေကျက ပထမဆုံး လယ်ယာ(စပါးစိုက်ရန်)ကို လယ်မဟုတ်အောင်
ယာ သို့မဟုတ် နှစ်လတ်သီးနှံ ၊ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးခြံဖြစ်အောင် အရင်လုပ်
ပြီးမှ အဲဒါကို လန လျှောက်၊
ကျတော့မှ ယာယီအဆောက်အအုံဆောက်ခွင့်လျှောက် သို့မဟုတ်
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူများလက်ကလယ်ကိုသိမ်း၊ လယ်ကိုဖျက်ပြီး ရောင်းတန်းဝင်အောင်လုပ်ရင်း
အဲဒီခေတ်မကုန်သေးဘူးထင်လို့ ရှေးမီနောက်မီ ခေတ်ပျက်သူဌေးကြီး
(ပန်းတွေကြားမှာ မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေတဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့ ရှက်ပြုံး။)
ကိုချောရဲ့ မြင်တတ်၊ တွေးတတ်၊ ရေးတတ်ပုံလေးကို သဘောကျမိတယ်။
ဦးဘလက်က မျက်မှန်အမဲကြီးနဲ.ဆိုတော့ ပြုံးပြမှာပေါ့ မမရယ်.. မမလဲ ဦးဘလက်လို မျက်မှန်အမဲကြီးတပ်သွားလေ..ဟေဟေ
ရှင့် ချိုပေါ့ကျ အရသာက မသောက်ရ မနေနိုင် အောင် ဖြစ်ကြတော့မယ် လို့ ပထမဆုံး နိဒါန်းပျိုးပါတယ်။
ဒုတိယ အကြောင်းကတော့ ညကျမှ အေးအေးဆေးဆေး ဝင်မန့် ဖို့ ဟာ မနေနိုင် လွန်းလွန်း လို့ ဝင်မန့် ပါတယ်။
မနေနိုင်ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း ကတော့
Street View ဂျာနယ်ထဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ဒေါက်တာစိုးမင်းနဲ့ အင်တာဗျူးလေးထဲက အမေးအဖြေလေး ကြောင့် ပါဘဲ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပြီး ပြိုင်တဲ့ သူ့စိတ်ဓာတ် ကို ချီးကျူးပါတယ်။
သူ့အကြောင်း ရေရေရာရာ မသိရသေးတော့ လေးစားလို့ တော့ မသုံးချင်သေးပါဘူး။
အဲဒီလို ပြိုင်သူ ရှိမှလဲ ပိုလို့ ကောင်းပါမယ်။
သူ့ထက် ပိုပြီး နာမယ်ကျော်သူ မရှိတော့ဘူးလားလဲ တွေးရင်း စစ်တုရင် ပြိုင်ပွဲ မှာ ကိုယ့်ဘက်က နယ်စားရုပ် လေးတွေ ထိုးထိုးကျွေး ရတာကို သတိရ မိတယ်။
ကျွန်မ အနေ နဲ့ ဒေါက်တာစိုးမင်း ကို ပြောခွင့် ရရင် ပြောချင်ပါတယ်။
သူပြောတာ တကဲ့ကို မှန်ပါတယ်။
“မိဘ နောက်ခံ နဲ့ မွေးဖွားရာ Position ပေါ် မူတည်ပြီး လူ့ဘ၀က ပြောင်လဲသွားနိုင်တယ်။” ဆိုတာလေး
ပြဿနာက ကျွန်မ တွေ့ရတဲ့ သူတို့ ရဲ့ မိဘ တွေ ဆိုတာ က လက်ရှိ လက်တွေ့ဘဝမှာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မိဘ က ဆင်းရဲသားအဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူ တွေ
ဒေါက်တာစိုးမင်း ရဲ့ မိဘ က ပြည်သူတွေကို ငရဲထဲကို တွန်းပို့နေတဲ့/ တွန်းပို့ခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ
တကယ်လို့ များ ရှင် အနေနဲ့ နိုင်ငံ ကိုတကယ်ချစ်ရင်
ရှင်ပြောတဲ့ ရှင့်ရဲ့ မိသားစု တသက်လုံး မကျန်းမမာနဲ့ ငတ်ပြတ် နေခဲ့ တာကို တစ်ချိန်လုံး မသိချင်ယောင် ဆောင်နေပြီး အခု မှ ထပြီး အသံကောင်းဟစ် မနေဘဲ
လက်ရှိ တိုင်ပြည် ရဲ့ အခြေအနေ လေးကို ကွင်းဆင်းပြီး ကြည့်လိုက်ပါဦး။
ကိုဘလက် – ပြန်လာမယ်နော်။ ဒါ အစပျိုး။
“ရွာ ကိုလည်း တစ်ချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်”
အချက်တစ်ရာလောက် ဒဲ့ ကြည့်ချင်တာပါအေဟဲ့။
အခုတောင် ချောင်းတွေကဆိုး လည်ချောင်းတွေကနာ
မရိုက်တာကြာပြီမို့ ကကြီးရှာမရ၊ ခခွေးရှာမရ တုန်ချိချိ ရစ်သမ်နဲ့
ကြိုက်တာက “ရှယ်ပုံမှန်” .. လှနေတာက ချိုပေါ့ကျ။
ဘာကို မန့်ရမယ်စဉ်းစားတော့ ကိုက်နေတဲ့ ခေါင်းက ဘွားတော်
သေချင်လို့လားတဲ့၊ ကျုပ်မစဉ်းစားနိုင်သေးဘူး၊ အသာလုပ်တဲ့။
ဒီတော့ To put it inanutshell, ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်။
(၁) စတစ်ပို့စ် ရတဲ့ အတွက် Congratulations!
(၂) အရသာရှိတဲ့ စာပေကို ( ဖြစ်သလို မဟုတ်ဘဲ) စေတနာပါပါရေးတတ်
ခြင်းအတွက် ( A+) ပါ။
(၃) ပို့စ်မတင် ကွန်မန်းမဝင်သည်မှာကြာပြီ ဖြစ်ပါ၍ မေ့သွားကြပြီထင်နေတာကို
သတိတရမေးဖော်ရတဲ့ အတွက် ( ကျေးကျူးကမ္ဘာဆိုင်ပါ)။
ချိုပေါ.ကျသောက်ပြီး တစ်ညလုံးလန်းသွားပြီကိုချောရေ ….။ဂျာနယ်အစုံမဖတ်ဖြစ်တော. ချိုပေါ.ကျနဲ.
တစ်ချိူ့နယ်ဘက်မှာ မိန်းမ ရာသီလာတာကို ရာသီလာတယ် မပြောဘဲ လုံချည် လာတယ်လို့ပြောကြောင်းသိခဲ့ဘူးပါတယ် …..ဆိုတော့ အပျိုကြီး လုံချည် ပျောက်တယ်လို့ ပြောတာ ဟာ ရာသ်ီမလာတာ ပြောတာ ဆိုတော့ အဲ့ဒါလေး ကြားဘူးနားဝရှိထားမှ ပို ရီရမယ်ထင်ပါတယ် ။
သီးလေးသီး အဖွဲ့ ကခွင့်ပိတ်တာတော့ ဂေါပက အဖွဲ့ကို ပြက်တဲ့ ပြက်လုံးတွေဟာ သူတို့ သိက္ခာကို ထိပါးလို့ ပါလို့ ဆိုပြီး ဂေါပက အဖွဲ့ က သတင်းစာရှင်းလင်းကြောင်းနဲ့ သီးလေးသီး အဖွဲ့ကိုလည်း တရားစွဲမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း မြန်မာတိုင်းမ်မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ် ။ သီးလေးသီး အဖွဲ့ဟာ ဂေါပက ကို မကျေနပ်တဲ့ ပွဲ ကန်ထရိုက်ယူတဲ့ သူတွေ ပေးတဲ့ မမှန် သတင်းတွေကို ထည့်ပြက်တဲ့ အတွက် ကြောင့်လို့ ပြောပါတယ် …..
ရွာထဲကိုမလျှောက်ဖြစ်ဘဲ အိပ်နေတာ အခုမှထလာတာ လက်ဘက်ရည်လေးသောက်ရတာ လန်းသွားတာပဲ
အခုတော့ ဟိုပြတ်ဒီပြတ်နဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့အခါကျ ပေါက်ကရ ရွှီးပါအုံးမည်
(၂)တရားကို နတ်မစောင့်ရင် တရားသေလို့ဆွမ်းသွတ်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံလေးပြောပြပေါ့။
(၃)ရုပ်ရှင်အကြောင်းကတော့ အခုနောက်ပိုင်း အကယ်ဒမီဆု တော်တော်များများက အလှည့်ကျလို့ ပေးတဲ့ စနစ်မျိုးဆိုတော့ မပြောတော့ဘူး။
(၄)အပျိုကြီးတွေက ရှက်တတ်တယ်။မင်းသမီးတွေက လက်ခံပြီး ရိုက်တောင် ကျွန်မတို့က မကြည့်ရဲဘူး။
(၅)ဒေါက်တာစိုးမင်းအကြောင်းတော့ကိုဘလက်ကို ပြောထားပြီးသား ၊မဝေဖန်ဘူးနော်။အဂတိလွတ်အောင်။
ဒီတစ်ခါ အိပ်ချင်ပြေဟာသထည့်ရင် အင်ဂျင်နီယာတွေ အလှည့်
ရွာထဲမှာ အင်ချင်နီယာတွေက ပိုများးတာ။
(၇)မြောင်းထဲကမြွေလေး သနားပါတယ်။ရေတွေက ညစ်ပတ်လို့ ၊အမှိုက်တွေနဲ့၊ကြာရင် ရေနေသတ္တ၀ါတွေတောင် အသက်ရှင်နိုင်ကြပါတော့မလား။
ခြင်္သေ့က ပန်းတွေနဲ့ဆိုတော့ အမလေးများလား။Shy Di ကို သတိရမိတယ်။
ပြန်ကြည့်မိတော့မှ မုတ်ဆိတ်ကြီးနဲ့ ဆိုတော့ ခြင်္သေ့ထီးကြီးပဲ၊ဆောရီး။
ထူးဆန်းသောဘုရားက အမျိုးသားနေ့ ကျောက်စာနားက ဂ၀ံဘုရားလား။
မှတ်ချက် ၂ခါဝင်လို့ စိတ်မရှိပါနဲ့ဟေ့။
အခုဘဲ အဲဒီ ကာတွန်း ကို ဖတ်ပြီး နဲနဲလေး ခံစားနေရလို့ အရင်တောင်းပန် ထားတာပါ။
ကြည့်ပါဦး။ ကောင်းကြသေးရဲ့လား လို့။
သို့သော် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် မန့်တာ ဘာဖြစ်လဲ။ ဘာဖြစ်လဲ။ ;-)
ကဘချော ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေး သံသရာ လည်ပုံ ကို ဖတ်ပြီး ပြုံးမိပါတယ်။
အင်တာနက် မှာတော့ ဒီလိုဘဲ မြောက်မြားလှစွာသော စာတွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ ပလူပျံ နေတာ ထဲက သံသရာလည်တာ အနဲအကျဉ်းသာမို့ အားရပါးရဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ ကဘချောရေ။
ဇီလေးက ကလေးတို့ ရဲ့ ဆရာမလေးဘဲ၊ ဒီလောက် မန်မိုရီ ကတော့ အသေးအဖွဲ နေမှာပေါ့။ မဟုတ်လား ဆရာမလေး။ :-)
အဲဒီဧရာဝတီဘလော့ဂ် လေး ရရင်ကောင်းမယ်။ ဘာကို ရေးထားလဲ သိချင်လို့။
ဥပဒေ သေသေချာချာ ရေရေရာရာ မရှိသ၍ …..
အဲဒီ ဥပဒေ ကို မှန်မှန်ကန်ကန်နည်းလမ်းကျ စောင့်ရှောက် မဲ့သူမရှိသ၍ ……
ဒါမျိုးပြဿနာတွေ ကို ဘယ်လိုမှ ရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ ထင်ပါ၏။
ဒီအခန်းဖြတ် မှာ အကယ်ဒမီထက် သာတဲ့ ဆု ရခဲ့ပြီဘဲ။
အဲဒါကို ရိုက်ကထဲ က ဘုရင့်နောင်ဖောင်ဖျက် သလို ပါ။
ဒီတော့ ဒီအစိုးရက မပေးမှာလဲ သိပြီးသား မို့ စိတ်ထဲမှာ ဘာမှမထားဘဲ ရှေ့ဆက်ပြီး ကိုယ့်အရည်အသွေး ကိုဆက်မြှင့်ဖို့ကို ဘဲ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အမှန်တော့ အနုပညာဆိုတာ ပြည်သူတွေ အတွက်ပါ။
ဆုပေးမဲ့ လူတွေ အကြိုက် ဖန်တီး (တနည်း ဖား) ပြီးမှ ရတဲ့ ဆုထက် အမှန်တရား ကိုပြလိုက်လို့ ဆုမရလိုက်တာက ပို ပြီး မြင့်မြတ်ခမ်းနား ပါတယ်။
မျှမျှတတ ဖြစ်စေချင်ရင်တော့ မူကောင်းကောင်း ချပြီး အဲဒါကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ အကြောက်တရား ရှိလူတွေ ဘေးဖယ်နေဖို့ပါဘဲ။
မှန်တာလုပ်ရဲတဲ့ သူတွေ နေရာ ရရင်တော့ ဒီပြဿနာ ရှင်းနိုင်ကောင်းပါရဲ့။
အခုချိန်မှာ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် အချိန်မို့ ပြည်တွင်းဖြစ် ပြည်တွင်းပြ အချစ်ကား အနေနဲ့ ကတော့ ဖက်ရမ်းနမ်းရှုံ့မပြလဲ အားလုံး လက်ခံနေတာပါ မဟုတ်လား။
ပြည်ပအတွက် ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။
ဒါပေမဲ့လဲ ပြည်ပ အဆင့်မှီရိုက်ဖို့ အဝေးကြီး လိုသေးတယ်ထင်ပါရဲ့။
မြန်မာကားတွေမှာ ဟာကွက်တွေ အများကြီး။ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက် အနေအထား မှ အပြုသဘောကို ပြောပါသည်။
သီးလေးသီး ကတော့ ကိုယ်လဲ ဘာမှ မသိတာကြောင့် လျှာဝင်ပြီး မရှည်တော့ပါဘူး။
နိုင်ငံခြားက အစ်မ က အဝေးကနေ ကိုယ့်မိသားစု အတွက် ပူပန်လို့ အဖက်ဖက်က သိအောင်လုပ်ပြီး ပံ့ပိုးဖို့လုပ်နေတာ တွေ။
မိသားစုနဲ့ အနီးကပ်ရှိသူက အိမ်မှာ အမိန့်သား ထိုင်လို့ မကောင်းတဲ့သူတွေ နဲ့ပေါင်း၊ မကောင်းရာတွေလုပ်၊ အိမ်ကို အပေါင်ခံပြီး ကိုယ့်မိဘ အရင်းကို ကိုယ်စိတ် နွမ်းအောင် နှိပ်စက် နေတာတွေ။
အစ်မ က ပြန်လာပြီး မိဘ ကို အိမ်ဦးခန်းမှာ တင့်တင့်တယ်တယ် ထားဖို့ လုပ်နေမှ ထပြီး ဟောင်ပြနေတာ။
ကိုယ့်စကားမှာ ကိုယ် ဘယ်လောက်ယုံကြည်ဖို့ ကောင်းသလဲ။
ကိုယ့်ပြည်သူတွေ အကြောင်းအူမချေးခါး သိရက်နဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းမနေရတာ၊ လူအိုတွေ ထမင်းငတ် နေတာ၊ လူငယ်တွေပျက်စီး နေတာဟာ ရှင်တို့ရဲ့ လက်ထဲမှာ မဟုတ်ပါလား။
အရင်က ဘာမှ မလုပ်ဘဲ အခုမှ ဟန်လုပ် ချစ်ပြ နေတာ မို့
“ရာဇဝင်ထဲ မှာဘဲ နေခဲ့ပါတော့ ဒေါက်တာစိုးမင်း” ရှင့်။
မဟုတ်ရင် အပေါ်မှာ ညွန်းထားတဲ့ ကာတွန်း လိုဖြစ်တော့မယ်။
မမ …. ကြောက်ကြောက်။ (မမ ကို မဆိုလိုပါ။ ကိုယ့်ဟာကို ညွန်းပါသည် )
ဒါနဲ့ မြန်မာတို့၏ အချိန်တိုင်းတာမှု ကို ကြားတောင်မကြားဘူးခဲ့လို့ အလွန်တရာပင် ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
မြွေလေးလဲ အန္တရာယ်ကင်းကင်း နဲ့ လိုရာရောက်ပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်။
ပြုံးနေတဲ့ ကိုခြင်္သေ့ ကိုလဲ ပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။
နွေအခါမှာ ကြွေတော့မဲ့ သစ်ရွက်လေး တွေကိုလဲ ကောင်းရာသုဂတိလားစေဖို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီပုံက ပို့စကပ် လေးလိုဘဲ။ လှတယ်။
ချို ပေါ့ ကျ (၃) အတွက် ဆက်လက် အားမွေးထား ပါမည်။
အရီးလတ်ရေ သမီးရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လ်က ဆရာမ မဟုတ်ပါဘူး
ကျောင်းပြီးကာစတစ်နှစ်ပဲ လုပ်ခဲ့ရတာပါ အသံအိုးနည်းနည်းထိခိုက်သွားပြီးကတည်းက ထွက်လိုက်ရတာ အခုထိပါပဲ သီချင်း ၃ ပုဒ်လောက်ဆက်တိုက်ဆိုလိုက်ရင် အသံက သိပ်မထွက်ချင်တော့ဘူး
ဆရာဝန်က စကားများများပြောရတဲ့အလုပ်မလုပ်နဲ့ဆိုပေမယ့် တစ်ပတ်တစ်ရက်တော့ ဗော်လန်တီယာလုပ်ဖြစ်နေသေးတယ်
လက်ဖက်ရည် ချိုပေါ့ကျက ဘယ်လိုအရသာမှန်းမသိပေမယ့်
တီချင်း ရှိုတယ် ဆိုဘဲ ….
သများလည်း ရှိုပြမယ် …
ကိုညီထွဋ် ကိုလေး မျိုးဂျီး တို့ လုံးဝ (လုံးဝ) ပြန်မဆိုရဲတဲ့ …
တီချင်း ကိုဆိုပြမှာ ….
အို …သူတို့မပြောနဲ့ ဘိရုမာပြည် ရော့အန်ရိုး သမိုင်းမှာ ဘယ်ရော့ကာ မှ
ပြန်မဆိုရဲတဲ့ သီချင်းဂျီး …….
ကီးဂျီ တီနာ သံနဲ့ နားထောင်ပေး ..
မတ္ထီလာကန်ဝယ် …ဖားကောက်ခဲ့ပါ့မယ် …
ဗျိုင်းရှေ့က ပျံကာ ပျံကာ ရယ်…
မိုးစုန်းစုန်းချုပ်ပေါ့ … သမီးငယ်ရယ် ..ဟယ်…
အိပ်ပါတော့ကွယ် …. ကြောင်ကြီး ကိုက်လိမ့်မယ်…
အိပ်ယာက နိုးရင်း …ဘလားဘလားဘလား…….
အမှန်ကတော့.. ဒီခေတ်သတင်းဖတ်ပုံ.. ပုံစံပြောင်းသွားပါပြီ..။
ယူအက်စ်ရဲ့.. သတင်းလောကလည်း.. အောက်ကမန်းတာနဲ့.. အလုပ်လုပ်နေကြတာပါ.။
နိုင်ငံေ၇းသမားတွေလည်း.. အဲဒီအောက်ကမန်းတာတွေနဲ့.. ကိုယ့်အတွေ့အကြုံပေါင်းပြီး.. လူထုတကယ့်အသံကို ဆွဲထုတ်ယူကြတာပေါ့…
ဒါလိုဖြစ်လာကြမှာမြင်လို့.. ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကို.. အဲလိုအလေ့အကျင့်ရအောင်.. အသက်သွင်းခဲ့တာပါလို့ပြောရင်တောင်ရတယ်..။
အခုတော့.. မြန်မာသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်အားလုံးလိုလို.. မန်းတာခွင့်ပြုထားကြပြီပေါ့…။
အင်း..ဒို့စိန်မြန်မာတွေကတော့.. agree to disagree (လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲကြခြင်း)ကိုသိပ်သဘောမပေါက်သေးပဲ.. ထစ်ဆို.. နောင်ဂျိန်တွေများတယ်..။
ချို ပေါ့ ကျ (၃) တွင်.. ဘေးနားတွင်ချသောမုန့်ပါယူစားမည်ဖြစ်ကြောင်း…
စကားအလွန်များချင်တဲ့ ကျွန်မ က ဒီလိုမျိုး စကားပြောလို့ ရတဲ့ နေရာ ရှာနေတာ။ ;-)
ပြောရရင်တော့ ရေးတဲ့သူက ကိုယ့်ခံစားမှု့နဲ့အမည်ပေးထားလေတော့
ကိုယ်ကဖတ်တဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ့်အမြင်နဲ့ဘဲပြောရမှာဘဲ
လဘက်ရည်တစ်ခွက်များဖြစ်ခဲ့ရင် ချိုဆိမ့် တစ်ခွက်လို့ဘဲအမည်ပေးမိမှာ
သက်ဆိုင်ရာ သတင်းတွေကို ရှာဖွေဖတ်ရှု့ဘို့ အကြောင်းတွေဖြစ်လာစေတယ်လို့လည်းမြင်မိပါတယ်
သက်ဆိုင်ရာ သတင်းတွေတွက် ဘာမှ မှတ်ချက်မချပေးနိုင်ခဲ့တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနော
ဒီနေ့ sticky လုပ်ထားတာမြင်တော့မှပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ် … နောက်ကျသွားတယ်ပေါ့ …
လက်ဖက်ရည်မကြိုက်တတ်တော့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်ပြီး ၀င်မဖတ်လိုက်မိတာ …
အခုတော့ ချိုပေါ့ကျကို စွဲသွားပြီ … မသောက်ရ မနေနိုင်တော့ဘူး …
ဂေဇက်တံခါးကိုမစောင့်တော့ပဲ လိုင်းပြောင်းသွားတာကိုး ….
ချိုပေါ့ကျကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ် …
နေ့တိုင်းရေးနိုင်ရင် မနက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာဖွင့်ဖွင့်ချင်း နေ့တိုင်းသာ ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အရသာရှိတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သွားမှာပဲနော် …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ. ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မယ် ဒေါက်ဒေါက် က အမေစုနဲ. သူကိုသူ နေရာချင်းလဲ ပြီးပြောနေတာတော့ သိပ်အထာမကြဘူး.. စိတ်ကြီးဝင်နေတယ်ထင်တယ်… သူကိုတစ်ခုတော့မေးချင်တယ် အမေစုနေရာမှာ သူရောက်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် မိသားစု နဲ. ဘ၀ ကိုစွန်.လွှတ်ပြီး နှစ်အကြာကြီး အကျယ်ချုပ်နဲ. နေပြီး တိုင်းပြည် အလုပ်လုပ်ရဲလားလို…
ချိုပေါ့ကျ2လုပ်ပါကိုချောရယ်။
သူတော်ကောင်းကြီးဦးခင်ညွန့် သိန်းတရာကြော်ငြာကို ထပ်ရှင်းပါရစေဗျား သူရတဲ့သိန်းအစိတ်က ဘယ်ကရတယ် ဆိုတာပြောပြီးပြီလေ။ နောက်ထပ်သူက ၇၅သိန်းထပ်ထည့်ပြီး ၁၀၀မတည်တာ။
ခင်ညွန့်တို့များ သနားစရာ။ ဒါထက် ဟော့နွားရူး က မမ ထိုင်ဖူးနေတဲ့ခင်ညွန့်ပုံမှာ ခင်ညွန့်ထိုင်နေတဲ့ ခုံဘယ်လောက်တန်တယ်မှတ်တုံး။ သိန်း ၁၂၅လောက်ရှိတယ်နော်။ ဆင်းရဲရှာတယ်။ ဒီင်္ကောင်ကြီးတွေ ကောင်းလား မကောင်းဘူးလား ကိုချော ဝီစိကိစ္စာမပြတ်ဘူးဖြစ်နေရင် နောင်မှာ ထပ်ရှင်းပြပါဦးမယ်။
ပေါက်ဖေါ်ကတော့ ပျောက်လိုက် ပေါ်လိုက် မုန့်လုံးရေပေါ်အကွက် နင်းနေတယ်လို့
ပြောနေပြီဗျို့။ ရွှေတိဂုံ ဘုရားကို သွားဖြစ်အောင်သွားမှာပါ။
ပို့စ်လေးဘာလေး ရေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။
သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ရွာရဲ့ နောက်ထပ် အလှူ တစ်ခုလောက်ဖြစ်မြောက်အောင်
ကွန်းမန့်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
အဲဒီ ကိစ္စက တော်တော် ကြီးသိသာ ထင်ရှားနေတဲ့ ကိစ္စကြီးပါ။
ဘယ်နှယ့် တစ်သက်လုံး ဒီလယ်လေးနဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့လူတွေကတော့
တစ်ဧက သုံးသိန်းတဲ့၊ သူတို့ ပြန်ရောင်းတော့ သိန်းလေးရာတဲ့။
မသကာ တစ်ဧက သိန်းငါးဆယ်လောက်ပေးလိုက်ရင် ဘ၀ပျက်သွားမှာ မို့လား။
အခုကိစ္စကို ခေါင်းခံပြီး ရှေ့က ရဲရဲရင့်ရင့် တိုက်ပွဲ ၀င်ပေးနေတဲ့ ဟော့နယူးစ် ဂျာနယ်
အယ်ဒီတာချုပ် မမ ကိုလည်း ချီးကျူးသင့်ပါတယ်။
မနေ့က ကိုစိန်သော့က စာကလေး အလွမ်းကို စာဖွဲ့ခဲ့တယ်လေ။
အခုကျွန်တော်က ခြင်္သေ့ ရဲ့ အရှက် ကို မှတ်တမ်းတင်လိုက်တာပါ။
ညီလေး ဓါတ်ပုံရိုက်တုန်းက ခြသေ့င်္က ပြုံးမပြလိုက်ဘူးလား။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ခြင်္သေ့က ဘေးမှာ အုပ်ထိန်းသူတွေဘာတွေ ပါရင်
မပြုံးရဲဘူးဗျ။ နောက်တစ်ခါ အုပ်ထိန်းသူ ခေါ်မသွားနဲ့…။
ဟိုတစ်ညက တီချာကြီး ရွာထဲမှာပျောက်နေလို့
နေမကောင်းများ ဖြစ်နေသလားလို့ တွေးမိတာနဲ့
ဖုန်း ဆက်လိုက်တာ ကွက်တိပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
အခုရော နေကောင်းသွားပါပြီလား ခင်ဗျာ။
နေမကောင်းတဲ့ ကြားက ပေးခဲ့တဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက်
တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် တီချာကြီး ခင်ဗျာ။
လန်းသွားတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ် ကိုဆာမိရေ။
သီးလေးသီး အဖွဲ့ရဲ့ သတင်းလေး အားဖြည့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါညီလေးရေ။
ပျက်လုံးပျက်တဲ့ နေရာမှာလည်း ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတိုင်း စွတ်တင်လို့ မကောင်းဘူးဆိုတာ
သူတို့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုရသွားတာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီ လုံချည်ပျောက်တယ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုတော့ တော်တော် များများ သိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
ညီလေးရေ။ မသိသေးတဲ့လူငယ်တွေ အနေနဲ့လည်း အခုညီလေးကွန်းမန့် ဖတ်ရင် သိသွားကြမှာပါဗျာ။
ညီလေးရေ။ နေ့တိုင်းတော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။
အဆင်ပြေတဲ့အခါ ချဉ်ငံစပ်လေး ဘာလေးလည်း ကျွေးချင်ပါသေးတယ်။
တစ်မျိုးထဲဆို ရိုးသွားမှာပေါ့ နော့။
ဒေါက်တာစိုးမင်း ကို မည်သို့မျှ မရည်ရွယ်ပါဘူး ခင်ဗျာ။
အင်တာဗျူးပါ သူ့အပြောလေးတွေ ပြန်ရေးပြပြီး
အမေစု ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်
ဘယ်လို မားကက်တင်း မာယာတွေ သုံးသလဲ ဆိုတာလေး တင်ပြတာပါ။
ဒီတစ်ခါ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်းတွေအလှည့်ပါ။
အချိန်ရရင် အိမ်သာကြွေးလေး ဆပ်ပါဦး အစ်မရေ။
ကဗျာလေးနဲ့ ကွန်းမန့်လေးချီးမြှင့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ။
Moe Z –
သီချင်း ၃ ပုဒ်လောက်ဆက်တိုက်ဆိုလိုက်ရင် အသံက သိပ်မထွက်ချင်တော့ဘူး
အဲဒါဆိုရင်တော့ ၂ ပုဒ်ပဲ ဆိုတော့ ဗျာ။
လက်မထောင်ပြီး အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
သင်္ကြန်မှာ ဂီဇက် ရေကစားမဏ္ဍပ်လုပ်ရင် ရေလာပက်မှာလား ဟင်င်င်င် ????
ချို ပေါ့ ကျ လို့ အမည်ပေးထားပေမယ့်။ ချိုစိမ့် ကြိုက်တယ်ဆိုလည်း ချိုစိမ့်ပေါ့ခင်ဗျာ။
အကျရည်ပေါ့ အချိုစိမ့် ကြိုက်တယ်ဆိုလည်း အကျရည်ပေါ့အချိုစိမ့်လေး စိတ်ထဲမှတ်ပြီး
ဖတ်ပါခင်ဗျာ။ ကွန်းမန့်လေး ချီးမြှင့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
သူကြီး ရဲ့ အားပေးမှု အတွက် အားတက်ရပါတယ်။
ချိုပေါ့ကျ ၃ မှာ ပေါက်စီလေး၊ စမူဆာလေး၊ အီကြာကွေးလေးတွေပါ
ကျွေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါမယ် ဗျာ။
အစ်မရဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါနဲ့ ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် အစ်မ ကွန်းမန့်တွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါ
သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီးမှ ကွန်းမန့်လေးတွေကို
စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရေးတတ်တာ သွားတွေ့ရပါတယ်။
ပြောရရင် ပို့စ် ပိုင်ရှင် အကြိုက်ကွန်းမန့်လေးတွေ ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။
ကြယ်နှစ်ပွင့် ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ
အစ်မရဲ့ ပို့စ်တစ်ခုအပေါ် စိတ်ပါလက်ပါ ပေးတတ်တဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေက
အများကြီးအမှတ်ရတယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်ပါတယ်။
အခု ကွန်းမန့်ကိုလည်း သေသေချာချာ ဖတ်ပြီးမှ ရေးတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ကျပေမယ့် ကွန်းမန့် လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး ရေးပါမယ်။
လာသောက်ပါဦး လို့ ကြိုဖိတ်ပါရစေခင်ဗျာ။
အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတွက်ကျတော့ ငွေ မနှမြောဘူးဗျာ။
စမူဆာနဲ့ပေါက်စီတော့ ကြိုက်သဗျ
နံပြားဖုတ်မစားရတာ လဲကြာပြီ ဗျ…အိပ်ယာစောစောထဦးမှပါတကား..
အာဇာနည်နေ့ဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ကျဆုံးလေပြီးသော ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဆိုတာလောက်ပဲ သိထားကြတာလေးက နည်းနည်းများလွဲနေပြီလား မဆိုနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု ခရီးရှည်ကြီးမှာ အသက်စွန့် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ အာဇာနည်တွေကိုလည်း မေ့မထားသင့်ဘူး ပေါ့ဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ အာဇာနည်တို့ ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့ဗျာ။
အဲဒါကြောင့် ဦးသန့် ဓါတ်ပုံကို အာဇာနည်ဗိမာန်မှာ ချိတ်ပြီး ရုပ်သံဇာတ်လမ်း ရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ဦးသန့်ကလည်း အာဇာနည်တစ်ယောက် ဟုတ်မဟုတ်
ချိုပေါ့ကျ ၁ ထဲမှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တာလေး ဘယ်သူမှ မဆွေးနွေးသွားလို့
ကော်ပီလုပ်ပြီး ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ တောင်းဆိုတာပါ။ နည်းနည်း ဆွေးနွေးပေးကြစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
Kill (someone) because of their beliefs: “she was martyred for her faith”
လုပ်ကြံခံရသူတွေ ညွှန်းပုံရပါတယ်..။ ဆိုတော့..အဲဒီသတ်မှတ်ချက်နဲ့ဆို… ဦးသန့်မပါလောက်ပါဘူး..။
အပေါ်ကလင့်ခ်မှာတော့.. အာဇာနည်နေ့လုပ်တာ.. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေထဲ.. ၁၀နိုင်ငံပဲရှိတယ်..။
Martyrs’ Day (Albania), on May 5, the anniversary of Qemal Stafa’s death, the 28,000 Martyrs of World War II are remembered
Genocide Remembrance Day, also known as Armenian Christian Martyr day, on April 24 in Armenia, commemorating the Armenian genocide from 1915 to 1923 in Ottoman Empire Turkey.
Martyrs’ Day in Azerbaijan is observed on January 20, in memory of those killed in the Black January events.
Language Movement Day, also known as Language Martyrs’ Day, on February 21 in Bangladesh, commemorating Bengali asanational language.
Burmese Martyrs’ Day, on July 19, the day when seven Burmese independence leaders were assassinated in 1947.
Martyrs’ Day (India), is observed on January 30, the anniversary of the assassination of Mohandas Gandhi in 1948.
The Liberation of Khorramshahr in 1982 is celebrated as Martyrs’ Day in Iran on its anniversary, May 24.
Martyrs’ Day (Lebanon and Syria), commemorates the execution of Syrian nationalists in Damascus by the Ottoman occupants on May 6, 1916.
Martyrs’ Day (Panama), isaPanamanian holiday which commemorates the January 9, 1964 riots over sovereignty of the Panama Canal Zone.
သဂျီးပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုအရ လုပ်ကြံခံရမှ အာဇာနည်ဆိုရင်တော့ …
ဦးသန့်ဟာ အာဇာနည် မမည်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ဥာဏ်အမျှော်အမြင်ကြီးမှု၊ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့အကျပ်အတည်းကြီးတွေကို
သူရဲကောင်း တော့ မည်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဦးသန့် က အာဇာနည်မမြည်ပေမယ့်
မြန်မာပြည်ရဲ့ သူရဲကောင်း တစ်ယောက် ဆိုတာကို